काठमाडौं – सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल एपीएफ महिन्द्रा क्लबबिचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको छ ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर चुकाए । १० औं मिनेटमा शेर्पाका अमर डंगोलले फितलो प्रहार गरेलगत्तै एपीएफका युवराज खड्काले पनि गोलरक्षकलाई समस्यामा पर्न सकेनन् । निरज बस्नेतले पेनाल्टीक्षेत्र बाहिर पाएको दुई फ्रिकिकमा कुनै खतरा सिर्जना गर्न सकेनन् । शेर्पाका कर्ण लिम्बू, अमर डंगोल, राज पौडेलको आक्रमणमा तालमेलको कमी देखिएको थियो ।
दोस्रो हाफको सुरुवातमै एपीएफले अग्रता लिने मौका चुकायो । सुदिप सिख्राकारको क्रसमा युवराजले बलसम्म पुग्न नसक्दा स्कोर गोलरहित नै रहयो । त्यसको तीन मिनेटपछि कर्णले गोल गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् । विश्वास श्रेष्ठको क्रसमा उनको हेडर सिधै गोलरक्षकको हातमा पुगेको थियो । ७८ औं मिनेटमा एपीएफका युवराजले पेनाल्टी क्षेत्र भित्रबाट गरेको प्रहार पोस्टभन्दा थोरै बाहिर गएको थियो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५१४:०५
केन भित्राउने योजनाबाट रियल पछि हट्यो !
लगातार हार व्यहोरिरहेको दिल्ली अब भने सन्दीपलाई खेलाउने मुडमा: यस्तो छ तयारी
पाराग्लाइडिङ टिमलाई पोखरामा स्वागत गरिने !
यी हुन् विश्व फुटबलमा अहिलेका ५ उत्कृष्ट मिडफिल्डर !